Satellite Sentinel-6: endri-javatra, fomba fiasa ary inona izany | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 09/05/2022 09:12 | Ciencia
Natomboka avy ao amin'ny tobin'ny Air Force Vandenberg any Kalifornia ny zanabolana mandinika ny tany mandroso indrindra eran-tany. Ny vokatry ny fiaraha-miasa manan-tantara eo amin'i Etazonia sy Eoropa, ny zanabolana Sentinel-6 Michael Freilich dia hanao iraka dimy taona sy tapany mba hanangonana angona marina momba ny haavon'ny ranomasina sy ny fiakaran'ny ranomasina noho ny fiovan'ny toetr'andro. Ny iraka dia hanangona angon-drakitra momba ny mari-pana sy ny hamandoana marina, izay hanampy amin'ny fanatsarana ny vinavinan'ny toetrandro sy ny maodely toetrandro.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny zanabolana Sentinel-6, ny toetrany sy ny maha-zava-dehibe azy.
2 Ahoana no anampian'i Sentinel-6
2.1 Sentinel-6 dia hanome vaovao ny mpahay siansa
2.2 Ho hitan'izy ireo ny zavatra tsy hitan'ireo misiônera an-dranomasina teo aloha
2.3 Sentinel-6 dia miorina amin'ny fiaraha-miasa mahomby eo amin'i Etazonia sy Eropa
2.4 Hanatsara ny fahatakarana ny fiovaovan'ny toetr'andro izany
2.5 Nohatsaraina ny toetr'andro
Ny zanabolana dia nomena ny anaran'ny Dr. Michael Freilich, talen'ny Diviziona Siansa Tany an'ny NASA taloha, mpiaro tsy sasatra amin'ny fandrosoana amin'ny fandrefesana zanabolana ranomasina. Sentinel-6 Michael Freilich dia manorina amin'ny lova navelan'ny iraka Sentinel-3 Copernicus an'ny European Space Agency (ESA) sy ny lova navelan'ny TOPEX/Poseidon sy Jason-1, 2 ary 3 zanabolana fanaraha-maso an-dranomasina Natomboka tamin'ny 2016, Jason-3 dia manohy manome angon-drakitra andiam-potoana avy amin'ny fandinihana TOPEX/Poseidon 1992.
Tao anatin'ny 30 taona lasa, ny angon-drakitra avy amin'ireo zanabolana ireo dia nanjary fenitra henjana amin'ny fandalinana ny haavon'ny ranomasina avy amin'ny habakabaka. Sentinel-6, rahavavin'i Michael Freilich, Sentinel-6B, kasaina hanomboka amin'ny 2025 izy io ary hanohy ny fandrefesana mandritra ny dimy taona farafahakeliny.
"Ity firaketana fandinihana mitohy ity dia tena ilaina amin'ny famantarana ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fahatakarana ny anton'izany," hoy i Karen Saint-Germain, talen'ny Diviziona Siansa Tany NASA. “Amin'ny alàlan'ny Sentinel-6 Michael Freilich, dia miantoka izahay fa mandroso amin'ny habeny sy ny fahamendrehana ireo fandrefesana ireo. Ity iraka ity dia manome voninahitra ny mpahay siansa sy mpitarika malaza ary hanohy ny lova navelan'i Mike amin'ny fampandrosoana ny fikarohana momba ny ranomasina. "
Ahoana no anampian'i Sentinel-6
Ahoana àry no hanampian'i Sentinel-6 Michael Freilich hanatsara ny fahatakarantsika ny ranomasina sy ny toetrandro? Ireto misy zavatra dimy tokony ho fantatrao:
Sentinel-6 dia hanome vaovao ny mpahay siansa
Ireo zanabolana dia hanome vaovao hanampiana ny mpahay siansa hahatakatra ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny morontsirak'i Tany sy ny hafainganam-pandehan'izany. Tsy afa-misaraka ny ranomasina sy ny atmosfera eto an-tany. Ny ranomasimbe dia maka ny 90 isan-jaton'ny hafanan'ny Tany amin'ny fampidirana entona mampidi-doza, izay mahatonga ny ranomasimbe hivelatra. Amin'izao fotoana izao, izany fanitarana izany dia ny ampahatelon'ny fiakaran'ny ranomasina, fa ny rano avy amin'ny glacier miempo sy ny ranomandry kosa no sisa.
Nihaingana ny fiakaran’ny ranomasina tao anatin’ny roapolo taona farany, ary tombanan’ny mpahay siansa fa mbola hihafaingana kokoa izany amin’ny taona ho avy. Ny fiakaran'ny ranomasina dia hanova ny morontsiraka ary hampitombo ny tondra-drano sy ny tondra-drano. Mba hahatakarana bebe kokoa ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny olombelona, ​​mila firaketana maharitra ny toetr'andro ny mpahay siansa, ary ny Sentinel-6 Michael Freilich dia hanampy amin'ny fanomezana ireo firaketana ireo.
"Ny Sentinel-6 Michael Freilich dia dingana lehibe amin'ny fandrefesana ny haavon'ny ranomasina," hoy i Josh Willis, mpahay siansa momba ny tetikasa ao amin'ny NASA's Jet Propulsion Laboratory any Southern California, izay mitantana ny fandraisan'anjaran'ny NASA amin'ny iraka. "Ity no fotoana voalohany nahavitantsika namolavola zanabolana maromaro nandritra ny folo taona feno, noho ny fahafantarana fa fironana maharitra ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny ranomasina."
Ho hitan'izy ireo ny zavatra tsy hitan'ireo misiônera an-dranomasina teo aloha
Nanomboka tamin'ny taona 2001, tamin'ny fanaraha-maso ny haavon'ny ranomasina, ny andiana zanabolana Jason dia afaka nanara-maso ireo endri-pamokarana lehibe toy ny Gulf Stream sy ny zava-mitranga amin'ny toetrandro toa ny El Niño sy La Niña izay mirefy an'arivony kilaometatra.
Na izany aza, ny firaketana ny fiovana kely amin'ny haavon'ny ranomasina akaikin'ny faritra amoron-tsiraka izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitetezana sambo ary ny jono ara-barotra dia mbola tsy zakan'izy ireo.
Sentinel-6 Michael Freilich dia hanangona fandrefesana amin'ny fanapahan-kevitra ambony kokoa. Ho fanampin'izany, hampiditra teknolojia vaovao ho an'ny fitaovana Advanced Microwave Radiometer (AMR-C), izay, miaraka amin'ny altimeter radar an'ny iraka Poseidon IV, dia ahafahan'ny mpikaroka mandalina ireo endri-pamokarana kely kokoa sy sarotra kokoa, indrindra eo akaikin'ny morontsiraka.
Sentinel-6 dia miorina amin'ny fiaraha-miasa mahomby eo amin'i Etazonia sy Eropa
Sentinel-6 Michael Freilich no ezaka voalohany iarahan'ny NASA sy ESA amin'ny iraka zanabolana momba ny siansa momba ny tany ary ny fandraisana anjara iraisam-pirenena voalohany amin'ny Copernicus, ny fandaharan'asan'ny Vondrona Eoropeana momba ny tany. Manohy ny fomban-drazana lava amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny NASA, ny National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ary ny mpiara-miombon'antoka eoropeanina, anisan'izany ny ESA, ny Fikambanana Eoropeana ho an'ny Fampandrosoana ny zanabolana Meteorolojika (EUMETSAT) ary ny Foibe Frantsay momba ny Fikarohana an-habakabaka (CNES).
Ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena dia manome dobo fahalalana sy loharanon-karena ara-tsiansa lehibe kokoa noho izay azo omena tsirairay. Namoaka taratasy akademika an'arivony ny mpahay siansa mampiasa angon-drakitra momba ny haavon'ny ranomasina nangonin'ny andiana iraka zanabolana amerikana sy Eoropeana nanomboka tamin'ny fanombohana ny TOPEX/Poseidon tamin'ny 1992.
Hanatsara ny fahatakarana ny fiovaovan'ny toetr'andro izany
Amin'ny fanitarana ny firaketana eran-tany momba ny angon-drakitra momba ny mari-pana amin'ny atmosfera, ny iraka dia hanampy ny mpahay siansa hanatsara ny fahatakarana ny fiovan'ny toetr'andro eto an-tany. Ny fiovaovan'ny toetr'andro dia tsy ny ranomasina sy ny ety ambonin'ny tany ihany, fa misy fiantraikany amin'ny atmosfera amin'ny ambaratonga rehetra, manomboka amin'ny troposphère ka hatrany amin'ny stratosphère. Mampiasa teknika antsoina hoe occultation radio ny fitaovana siantifika ao amin'ny Sentinel-6 Michael Freilich mba handrefesana ny toetra ara-batana amin'ny atmosfera eto an-tany.
Ny Global Navigation Satellite Radio Concealment System (GNSS-RO) dia fitaovana iray manara-maso ny onjam-peo avy amin'ny zanabolana fitetezana hafa manodidina ny tany. Avy amin'ny fomba fijerin'i Sentinel-6 Michael Freilich, rehefa latsaka ambanin'ny faravodilanitra ny zanabolana iray (na miakatra), dia mamakivaky ny atmosfera ny famantaranandro radiony. Amin'ny fanaovana izany, mihena ny fambara, miova ny fatran'ny frequences ary miolakolaka ny lalana. Azon'ny mpahay siansa ampiasaina io vokatra io, antsoina hoe refraction, mba handrefesana fiovana kely eo amin'ny hakitroky, ny mari-pana ary ny hamandoan'ny atmosfera.
Rehefa manampy an'io fampahalalana io amin'ny angon-drakitra efa misy avy amin'ny fitaovana mitovy amin'izany miasa eny amin'ny habakabaka ny mpikaroka, dia ho azon'izy ireo tsara kokoa ny fiovan'ny toetr'andro eto an-tany rehefa mandeha ny fotoana.
"Tahaka ny fandrefesana maharitra ny haavon'ny ranomasina, mila fandrefesana maharitra ny atmosfera miova isika mba hahatakarana tsara kokoa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro," hoy i Chi Ao, mpahay siansa fitaovana GNSS-RO ao amin'ny Laboratory Air Propulsion. Jet. "Ny occultation radio dia fomba tena marina sy marim-pototra."
Nohatsaraina ny toetr'andro
Ny Sentinel-6 Michael Freilich dia hanampy amin'ny fanatsarana ny vinavinan'ny toetr'andro amin'ny fanomezana fampahalalana momba ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny meteorologists.
Ny altimeter radar an'ny zanabolana dia hanangona fandrefesana ny toetry ny ranomasina, ao anatin'izany ny haavon'ny onja lehibe, ary ny angona avy amin'ny fitaovana GNSS-RO dia hameno ny fandinihana ny atmosfera. Ny fitambaran'ireo fandrefesana ireo dia hanome fampahalalana bebe kokoa ho an'ny meteorologists hanatsara ny vinavinan'izy ireo. Ankoatr'izay, ny fampahalalana momba ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny atmosfera, ary koa ny hafanan'ny ranomasina, dia hanampy amin'ny fanatsarana modely amin'ny fiforonan'ny rivo-doza sy ny fivoarana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Sentinel-6 sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Sentinel-6 satelita
Toy ny mahazatra, ny fahalalanao sarobidy dia mampanan-karena anay isan'andro